Izahay no Global Voices Amin’ny Teny Alemàna ! · Global Voices teny Malagasy
Izahay no Global Voices Amin'ny Teny Alemàna !
Mpanoratra Julia Krebs Nandika (de) i Julia K., Amélie Marin, avylavitra
Voadika ny 14 Avrily 2017 4:52 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, Français, English
Iza avy no ao ambadik'ireo lahatsoratra sy dikanteny azonareo vakiana ao amin'ny Global Voices amin'ny teny Alemàna? Hita ao ny mombamomba ny tsirairay, afaka jerena izay nandika na nanoraitra ny lahatsoratra izatsy sy izaroa. Saingy raha zohiana, izay marina izahay ary inona no mampiray anay amin'ny Global Voices? Ao anatin'ity efitra fanehoana sary ity, tianay ny mampiseho ho anareo ny sasantsasany amin'ireo olona miasa ho an'ny Global Voices Deutsch.
Isabelle. sary nahazoana alàlana.
Isabelle, 27 taona. monina Royaume-Uni. Mpandika sy mpamoaka lahatsoratra ato amin'ny Global Voices.
Hatramin'ny oviana ianao no tato amin'ny Global Voices ?
Hatramin'ny fiandohan'ny 2015 aho no nandika ho an'ny Global Voices ary ao anatin'ny tarik'ireo miandraikitra ny media sosialy. Vao haingana koa aho no lasa mpiaramiasa mamoaka lahatsoratra amin'ny dikanteny Alemàna.
Tsaroanao ve ny fandikàna voalohany nataonao, raha eny, inona no lohahevitra tao?
Tena mbola tsaroako tsara mihitsy. Lahatsoratra miresaka taokanto natao ho an'ny maso, tetikasa iray notontosain'ireo ankizy mpialokaloka avy any Myanmar nomeny anarana hoe “Forced to Flee” (voatery nandositra), navoaka ho toy ny boky tamin'ny 2015.
Inona no nentin'ny GV no anao?
Betsaka ny zavatra haiko ary mahafantatra zavatra vaovao hatrany aho, miaraka amin'ny lahatsoratra tsirairay adikako. Io no tena zavatra mahafinaritra hitako ato amin'ny Global Voices : mifanehatra aminà lohahevitra sy trangan-javatra izay mety ho navela nandalo fotsiny tany amin'ny fotoana sy toerana hafa.
Inonano mahafinaritra anao ato amin'ny GV ?
Ny tiako manokana, mandray lohahevitra maro karazana kokoa. Na mifantoka amin'ireo lahatsoratra izay mahasarika ahy kokoa aza ny lohahevitr resahana, matetika aho no mamerina mamaky na mandika lahatsoratra izay vaova tanteraka amiko ny lohahevitra ao anatiny. Fanampin'izay, tena mahafapo ny maha-ao anaty vondrom-piarahamonina iray manerantany sy tena miray hina fatratra.
Inona avy ireo endrika fahasarotana manokana sy/na mampitombo fahalalàna rehefa mandika lahatsoratra ho an'ny GV ?
Endrika iray no tena mahasarika ahy – tsy ato amin'ny Global Voices irery ihany, fa amin'ny fandikàna lahatsoratra amin'ny ankapobeny – dia ny fahafahana mitaiza ny mpamaky ho zatra amin'ireo zavatra sy olana avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao. Ny manampy ny olona hahalala vaovao momba ureo tranga, izay mety tsy ho novakian'dry zareo akory na tsy ho takany, no tena manosika ahy. Ary mbola be lavitra noho izay rehefa lohahevitra mambabo ahy manokana no eo an-tànako.
Nandika (de) i Julia K.
11 ora izayGV Mpisolovava